DEG DEG:- Shirweyne lagu taageerayo musharaxnimada madaxweyne Xasan Sheekh oo ka bilawday Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Shirweyne lagu taageerayo musharaxnimada madaxweyne Xasan Sheekh oo ka bilawday Muqdisho
Waxaa goordhaw Hoteelka City Palace ee magaalada Muqdisho ka bilawday shirweyne lagu taageerayo inuu markale Xasan Sheekh Maxamuud isku soo sharaxo doorashada xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya.
Shirkaasi oo si heersare uga socda Hoteelka City Palace ayaa kasoo qeyb galay in ka badan 1,500 oo qof, kuwaas oo isugu jira siyaasiyiin, aqoonyahano, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro iyo ururadda bulshada ee beelaha Mudulood.
Waxaa mas’uuliyiinta ka qeyb galeyso shirkaasi ka mid ah ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya, Mudane Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde), wasiir ku xigeenka caafimaadka xildhibaan Prof. Cismaan Xaaji Maxamuud (Dufle) iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Shirkaasi ayaa sida la sheegay soo qaban-qaabiyay Odayaasha dhaqanka ee beelaha Mudulood, iyadoona shirkaasi uu yahay mid lagu taageerayo musharaxnimadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee doorashada sanadkaan dabayaaqadiisa ka dhici doonta dalka.
Dhinaca kale, shirkaan ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaantaan hadal kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku mamnuucday in iyadoo aan fasax laga heysan in shirar siyaasadeed lagu qabin karin hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho.